အစ်စရေးမှတျစု (၁)။ “အစ်စရေး အမြိုးသားနိုငျငံတျောဥပဒေ (၂၀၁၈)” – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 2, 2021 September 2, 2021 web_master
အစ်စရေးမှတျစု (၁)။ “အစ်စရေး အမြိုးသားနိုငျငံတျောဥပဒေ (၂၀၁၈)”
အစ္စရေးမှတ်စု (၁)။ “အစ္စရေး အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဥပဒေ (၂၀၁၈)”
● အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြသော လွတ်မြောက်ရေးတပ်သားများမှာ ဂျူးသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံညီညွတ်သော ဂျူးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလေသည်။ မိမိတို့ အသက်ပေးတည်ထောင်ခဲ့ကြသော အစ္စရေးနိုင်ငံတော်မှာ တနေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ဂျူးသွင်ပြင်လက္ခဏာကွယ်ပျောက်ပြီး အာရပ်မူဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရန် တည်ထောင်ခဲ့ကြခြင်း ဟူ၍ကား ဟုတ်ခဲ့လိမ့်မည် မထင်။ သို့ဖြစ်ရကား နိုင်ငံတည်ထောင်ခါစမှသာလျှင် မဟုတ် – နိုင်ငံကို တည်ဆောက်နေဆဲ အချိန်တိုင်း ကာလတိုင်းတွင် ထိုအချက်ကို အစဉ်အမြဲခေါင်းထဲထည့်လျက် အလုပ်လုပ်ကြ ရလေသည်။
● သို့သော်ငြားလည်း အစ္စရေးတို့သည် အခြားတစ်ဘက်တွင် အစ္စရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအား ဒီမိုကရေစီဆန်သော၊ အင်စတီကျူးရှင်းကျကျ စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ခေတ်အဆက်ဆက် ကောင်းစွာ ပုံဖော်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈-ခုနှစ် မေလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သော အစ္စရေးနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း၏ စာပိုဒ်ရေ (၁၃) တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ “. . . it (i.e. the State of Israel) will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all inhabitants irrespective of religion, race and sex; . . . ” “အစ္စရေး၏ ပရောဖက် တမန်တော်များက လှမ်းရည်မြော်မြင်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပေါ် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်သည် အခြေခံသည်။ နိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်သူမှန်သမျှတို့အား ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လူမျိုး နှင့် ကျား/မ ကွဲပြားမှုတို့အပေါ် မူတည်ခြင်းမပြုဘဲ လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ တန်းတူညီမျှ အပြည့်အ၀ ရရှိမှုကို အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က တာဝန်ခံသည်။”
● လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာပြီးပြီးချင်း အနီးအနား အာရပ်နိုင်ငံများက ၀င်တိုက်သည့် စစ်ပွဲ (၁၉၄၇-၁၉၄၉)၊ ခြောက်ရက် စစ်ပွဲ(၁၉၆၇)၊ ယွန်ကပူးစစ်ပွဲ (၁၉၇၃) တို့တွင် တိုက်ခိုက်ခံရသူ အစ္စရေးအနေဖြင့် ကျုးကျော်သူများကို တွန်းလှန်နိုင်ရုံသာမက နယ်မြေများကို တိုးချဲ့ သိမ်းယူနိုင်ခြင်း၊ သိမ်းပြီးသားနယ်မြေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းတို့ လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မိမိတို့ သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အထဲမှ အာရပ်မူဆလင်တို့ အများတကာ အများစု နေထိုင်ကြသော နယ်မြေများကို နိုင်ငံ၏နယ်နမိတ်အဖြစ် အတည်တကျသတ်မှတ်ခြင်းမပြုခဲ့ကြပေ။ ထိုကဲ့သို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက် ထိုနယ်မြေများတွင် နေထိုင်သူ အာရပ်မူဆလင်များ အစ္စနရေိးုင်ငံသားများ ဖြစ်လာခဲ့ကြလျှင် အစ္စရေးသည် ဂျူးကြံအင်လက္ခဏာများ အချိန်နှင့်အမျှ ပျက်ယွင်းသွားပြီး တစတစ မူဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေပေသည်။ သို့သော် နယ်မြေဧရိယာ သေးငယ်သော အစ္စရေးအဖို့ လုံခြုံရေးအရ ကြားခံရှိနေရန် နယ်မြေများကို အခုအခံ ယူထားနိုင်ခြင်း ဆိုသည့် အားသာချက်ကို လက်လွှတ်ရန် မသင့်လျော် ဟု တဖက်က စဉ်းစားယူဆကြသည်။
● ယခုလက်ရှိတွင်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံကိုသီးခြားတစ်ပိုင်း သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ (occupied territories)ကို နောက်တစ်ပိုင်း သီးခြားခွဲ၍ နှစ်နိုင်ငံအဖြစ် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကို အဖြေထုတ်မလား (two state solution) သို့တည်းမဟုတ် ထိုနယ်မြေများကို ပူးပေါင်းလျက် တစ်နိုင်ငံတည်းအဖြစ် ထူထောင်ခြင်းအားဖြင့် အဖြေထုတ်မလား (one state solution) လား ဆိုသည်ကို စဉ်းစားကြသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း အဖြေတစ်ခုခုနှင့်နီးစပ်နိုင်ရန် ယနေ့ထက်ထိ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အစ္စရေးဘက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ဂျုးများနှင့်စာလျှင် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည့် အာရပ်တို့ကို တစ်နိုင်ငံတည်းသားအဖြစ် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားပါက ရေရှည်တွင် အစ္စရေးသည် ဂျူးလက္ခဏာ ပျက်ယွင်းသွားသည့် အာရပ်လူများစုနိုင်ငံဖြစ်လာမည်ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ကြသော်လည်း ထိုစိုးရိမ်မှုရှိကြောင်း ၀န်ခံကြမည် မဟုတ်ပေ။
● ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သော (၂၀၂၀-ခုနှစ်) အချက်အလက်များအရ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၁.၈) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး၊ ပါလက်စတိုင်း ဟုဆိုရမည့် ဂါဇာနှင့် အနောက်ဘက်ကမ်း နှစ်ခုတို့၏ ပျမ်းမျှ လူဦးရေ တိုးနှုန်းမှာ (၂.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဂျူးဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံသားများအဖြစ် လာရောက်အခြေစိုက်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များအားဖြင့် ဂျူးဦးရေတိုးနှုန်း မကျစေရေးအတွက် အထိန်းအထေ ဖြစ်စေသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၀.၇) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမျှလူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၁.၀) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။) ချမ်းသာသောနိုင်ငံများသည် လူဦးရေ တိုးနှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ မူဆလင်နိုင်ငံများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လူဦးရေတိုးနှုန်းများ တတ်သော်လည်း ချမ်းသာသော မှုဆလင်နိုင်ငံများသည် အခြားသူလိုကိုယ်လို မူဆလင်နိုင်ငံများထက် လူဦးရေတိုးနှုန်း နည်းပါးသည်။ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများသည် လူဦးရေတိုးနှုန်းပိုများသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံများသည် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည်။ ထိုထက် လူဦးရေတိုးနှုန်းများသည်မှာ ကြွေးထူဆင်းရဲနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြလေသည်။ ဖြစ်နေကျဖြစ်စဉ် (pattern) အားဖြင့် မူဆလင်လည်းဖြစ်၊ ဆင်းလည်း ဆင်းရဲ၊ ပဋိပက္ခထူသောနိုင်ငံ (လူအုပ်စု)တို့မှာမူ လူဦးရေတိုးနှုန်း ကြီးမားနိုင်သည်။
● Pew သုတေသနဌာန (Pew Research Center) က ၂၀၁၅ တွင်ပြုလုပ်သော လူဦးရေတိုးမှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြု ခန့်မှန်းချက် တစ်ခုအရ – မူဆလင်တို့သည် ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေ တိုးနှုန်းအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၅ ကမ္ဘာ့မူဆလင်လူဦးရေသည် ၂၀၆၀ တွင် နှစ်ဆဖြစ်သွားလိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။ ၂၀၅၀ ခန့်သို့အရောက်တွင် ကမ္ဘာ့မူဆလင်လူဦးရေသည် ကမ္ဘာ့ခရစ်ယန်လူဦးရေကို ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေအများဆုံး ဘာသာဖြစ်လာမည် ဟု ဆိုသည်။ မူဆလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှကလေး (၂.၉) ဦး ရယူလေ့ရှိကြပြီး၊ မူဆလင် မဟုတ်သူ (အခြားဘာသာများအားလုံး) အမျိုးသမီးများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သားသမီး (၂.၂) ဦးသာ ရယူကြလေ့ရှိသည် ဟုဆိုသည်။
● လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့် ၂၀၁၈-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးလွှတ်တော်က “အစ္စရေးနိုင်ငံအား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတော်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့်ဥပဒေ” (Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People) ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ Basic Law ဆိုသည်မှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှုရှိသော ဥပဒေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အခြားဥပဒေများသည် ဤဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကျော်လွန်၍ မရနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်အဆင့် ဥပဒေဖြစ်သည်။
● ထိုဥပဒေ၏ ပထမဆုံးအပိုင်း “အခြေခံမူများ” က အရေးကြီးသော မူ သုံးရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။
(က) အစ္စရေးပြည်တည်းဟူသော မြေသည်ကား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ဇာတိအမိမြေဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမြေ အပေါ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ထားသည်။
(ခ) အစ္စရေးနိုင်ငံတော်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားဌာနေ ဖြစ်ပြီး၊ ဤနိုင်ငံတော်တွင် ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ဂျူးတို့၏ သဘာဝအရပိုင်ဆိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုအရဆက်နွယ်သော ဘာသာရေးအရပိုင်ဆိုင်သော သမိုင်းအစဉ်အလာအရပိုင်ဆိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးဖြည့်ဆည်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သည်။
(ဂ) အစ္စရေးအမျိုးသားနိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အား ကိုင်စွဲကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့နှင့် သီးခြားသက်ဆိုင်သည်။ (unique to the Jewish people)
● ဤဥပဒေပါ အခြားသိမှတ်ဖွယ်ရာ အချက်တချို့မှာ – ဟီးဘရူး (ဂျူးဘာသာစကား) အား “နိုင်ငံတော်၏ ဘာသာစကား” The State’s language အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊ အာရပ်ဘာသာစကားအား အထူးအဆင်းအတန်းရှိ ဘာသာစကားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ရပ်ဝေးမြေခြား ဒိုင်ယာစပိုရာ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စသည်အားဖြင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရန် ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ပြည်ပမှ ဂျူးဘာသာဝင်များအားလုံးအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံက အချိန်မရွေးတံခါးဖွင့်ထားရန် သတ်မှတ်သည်။ (အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသိမ်းပိုက်နယ်မြေအတွင်း) ဂျူးတို့က အခြေချအိုးအိမ်အစုများတည်ဆောက်ခြင်း (settlement) အား မူဝါဒတစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အသေအချာဖော်ပြ အားပေးထားသည်။ ဂျူးဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း အစ္စရေးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ သော်လည်းကောင်း ဒုက္ခကြုံနေကြရသည့် မည်သည့် ဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်မဆို သူတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်က အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရမည် – စသည်အားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ တိုတောင်းအားကောင်းလှသော အစ္စရေး အမျိုးသားနိုင်ငံတော် ဥပဒေအား အောက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
● ယနေ့လက်ရှိတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံသား အာရပ်လူမျိုး အရေအတွက်မှာ နိုင်ငံသားဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၂၀.၉၅) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ အာရပ်လူမျိုးမူဆလင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Raleb Majadele မှာ အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပထမဦးဆုံးသော အာရပ်မူဆလင်ဝန်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၇-ခုနှစ် လေဘာပါတီအစိုးရတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်လာခဲ့သည်။
[လူငယ်​များအတွက်​ နိုင်​ငံ​ရေး မှတ်​စုတိုများ (၁၇)]
● အစ်စရေးနိုငျငံပျေါထှနျးလာရေးအတှကျ တိုကျပှဲဝငျလာခဲ့ကွသော လှတျမွောကျရေးတပျသားမြားမှာ ဂြူးသှငျပွငျလက်ခဏာနှငျ့ ပွညျ့စုံညီညှတျသော ဂြူးအမြိုးသားနိုငျငံတျောတညျထောငျရနျ တိုကျပှဲဝငျခဲ့ကွလသေညျ။ မိမိတို့ အသကျပေးတညျထောငျခဲ့ကွသော အစ်စရေးနိုငျငံတျောမှာ တနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျတှငျ ဂြူးသှငျပွငျလက်ခဏာကှယျပြောကျပွီး အာရပျမူဆလငျနိုငျငံ ဖွဈလာစရေနျ တညျထောငျခဲ့ကွခွငျး ဟူ၍ကား ဟုတျခဲ့လိမျ့မညျ မထငျ။ သို့ဖွဈရကား နိုငျငံတညျထောငျခါစမှသာလြှငျ မဟုတျ – နိုငျငံကို တညျဆောကျနဆေဲ အခြိနျတိုငျး ကာလတိုငျးတှငျ ထိုအခကျြကို အစဉျအမွဲခေါငျးထဲထညျ့လကျြ အလုပျလုပျကွ ရလသေညျ။
● သို့သျောငွားလညျး အစ်စရေးတို့သညျ အခွားတဈဘကျတှငျ အစ်စရေးလူ့အဖှဲ့အစညျးအား ဒီမိုကရစေီဆနျသော၊ အငျစတီကြူးရှငျးကကြ စနဈတကအြလုပျလုပျသော လူ့အဖှဲ့အစညျးအဖွဈ ခတျေအဆကျဆကျ ကောငျးစှာ ပုံဖျောကာ အလုပျလုပျခဲ့ကွသညျ။ ၁၉၄၈-ခုနှဈ မလေ (၁၄) ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျ ကွငွောခဲ့သော အစ်စရေးနိုငျငံ လှတျလပျရေးကွငွောစာတမျး၏ စာပိုဒျရေ (၁၃) တှငျ အောကျပါအတိုငျး ဖျောပွပါရှိသညျ။ “. . . it (i.e. the State of Israel) will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all inhabitants irrespective of religion, race and sex; . . . ” “အစ်စရေး၏ ပရောဖကျ တမနျတျောမြားက လှမျးရညျမွျောမွငျခဲ့ကွသညျ့အတိုငျး လှတျလပျမှု၊ တရားမြှတမှု နှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးတို့အပျေါ အစ်စရေးနိုငျငံတျောသညျ အခွခေံသညျ။ နိုငျငံတျောအတှငျး နထေိုငျသူမှနျသမြှတို့အား ကိုးကှယျသညျ့ဘာသာ၊ လူမြိုး နှငျ့ ကြား/မ ကှဲပွားမှုတို့အပျေါ မူတညျခွငျးမပွုဘဲ လူမှုရေး နှငျ့ နိုငျငံရေး ဆိုငျရာ အခှငျ့အရေးမြား တနျးတူညီမြှ အပွညျ့အဝ ရရှိမှုကို အစ်စရေးနိုငျငံတျောက တာဝနျခံသညျ။”
● လှတျလပျရေး ကွငွောပွီးပွီးခငျြး အနီးအနား အာရပျနိုငျငံမြားက ဝငျတိုကျသညျ့ စဈပှဲ (၁၉၄၇-၁၉၄၉)၊ ခွောကျရကျ စဈပှဲ(၁၉၆၇)၊ ယှနျကပူးစဈပှဲ (၁၉၇၃) တို့တှငျ တိုကျခိုကျခံရသူ အစ်စရေးအနဖွေငျ့ ကြုးကြျောသူမြားကို တှနျးလှနျနိုငျရုံသာမက နယျမွမြေားကို တိုးခြဲ့ သိမျးယူနိုငျခွငျး၊ သိမျးပွီးသားနယျမွကေို ပွနျလညျထိနျးသိမျးနိုငျခွငျးတို့ လုပျနိုငျခဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ မိမိတို့ သိမျးပိုကျနိုငျသညျ့အထဲမှ အာရပျမူဆလငျတို့ အမြားတကာ အမြားစု နထေိုငျကွသော နယျမွမြေားကို နိုငျငံ၏နယျနမိတျအဖွဈ အတညျတကသြတျမှတျခွငျးမပွုခဲ့ကွပေ။ ထိုကဲ့သို့ သတျမှတျလိုကျပွီးနောကျ ထိုနယျမွမြေားတှငျ နထေိုငျသူ အာရပျမူဆလငျမြား အစ်စနရေိုးငျငံသားမြား ဖွဈလာခဲ့ကွလြှငျ အစ်စရေးသညျ ဂြူးကွံအငျလက်ခဏာမြား အခြိနျနှငျ့အမြှ ပကျြယှငျးသှားပွီး တစတစ မူဆလငျနိုငျငံ ဖွဈလာနိုငျခွရှေိနပေသေညျ။ သို့သျော နယျမွဧေရိယာ သေးငယျသော အစ်စရေးအဖို့ လုံခွုံရေးအရ ကွားခံရှိနရေနျ နယျမွမြေားကို အခုအခံ ယူထားနိုငျခွငျး ဆိုသညျ့ အားသာခကျြကို လကျလှတျရနျ မသငျ့လြျော ဟု တဖကျက စဉျးစားယူဆကွသညျ။
● ယခုလကျရှိတှငျလညျး အစ်စရေးနိုငျငံကိုသီးခွားတဈပိုငျး သိမျးပိုကျထိနျးခြုပျနယျမွမြေား (occupied territories)ကို နောကျတဈပိုငျး သီးခွားခှဲ၍ နှဈနိုငျငံအဖွဈ အစ်စရေး-ပါလကျစတိုငျး ပွဿနာကို အဖွထေုတျမလား (two state solution) သို့တညျးမဟုတျ ထိုနယျမွမြေားကို ပူးပေါငျးလကျြ တဈနိုငျငံတညျးအဖွဈ ထူထောငျခွငျးအားဖွငျ့ အဖွထေုတျမလား (one state solution) လား ဆိုသညျကို စဉျးစားကွသညျမှာ ကွာပွီဖွဈသျောလညျး အဖွတေဈခုခုနှငျ့နီးစပျနိုငျရနျ ယနထေ့ကျထိ ခကျခဲနဆေဲဖွဈပါသညျ။ အစ်စရေးဘကျမှ ထညျ့သှငျးစဉျးစားရာတှငျ ဂြုးမြားနှငျ့စာလြှငျ လူဦးရတေိုးနှုနျးမြားသညျ့ အာရပျတို့ကို တဈနိုငျငံတညျးသားအဖွဈ တနျးတူအခှငျ့အရေးပေးထားပါက ရရှေညျတှငျ အစ်စရေးသညျ ဂြူးလက်ခဏာ ပကျြယှငျးသှားသညျ့ အာရပျလူမြားစုနိုငျငံဖွဈလာမညျကို ထညျ့သှငျးတှကျခကျြကွသျောလညျး ထိုစိုးရိမျမှုရှိကွောငျး ဝနျခံကွမညျ မဟုတျပေ။
● ကမ်ဘာ့ဘဏျက ထုတျပွနျသော (၂၀၂၀-ခုနှဈ) အခကျြအလကျမြားအရ အစ်စရေးနိုငျငံ၏ လူဦးရတေိုးနှုနျးမှာ (၁.၈) ရာခိုငျနှုနျးဖွဈပွီး၊ ပါလကျစတိုငျး ဟုဆိုရမညျ့ ဂါဇာနှငျ့ အနောကျဘကျကမျး နှဈခုတို့၏ ပမျြးမြှ လူဦးရေ တိုးနှုနျးမှာ (၂.၅) ရာခိုငျနှုနျးဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာအရပျရပျမှ ဂြူးဘာသာဝငျမြားအနဖွေငျ့ အစ်စရေးနိုငျငံသားမြားအဖွဈ လာရောကျအခွစေိုကျနိုငျကွောငျး ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားအားဖွငျ့ ဂြူးဦးရတေိုးနှုနျး မကစြေရေေးအတှကျ အထိနျးအထေ ဖွဈစသေညျ။ (မွနျမာနိုငျငံ၏ လူဦးရတေိုးနှုနျးမှာ (၀.၇) ရာခိုငျနှုနျးဖွဈပွီး ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံး၏ ပမျြးမြှလူဦးရတေိုးနှုနျးမှာ (၁.၀) ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈသညျ။) ခမျြးသာသောနိုငျငံမြားသညျ လူဦးရေ တိုးနှုနျး အနညျးဆုံးဖွဈသညျ။ မူဆလငျနိုငျငံမြားသညျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ လူဦးရတေိုးနှုနျးမြား တတျသျောလညျး ခမျြးသာသော မှုဆလငျနိုငျငံမြားသညျ အခွားသူလိုကိုယျလို မူဆလငျနိုငျငံမြားထကျ လူဦးရတေိုးနှုနျး နညျးပါးသညျ။ ဆငျးရဲသောနိုငျငံမြားသညျ လူဦးရတေိုးနှုနျးပိုမြားသညျ။ ပဋိပက်ခဖွဈပှားနသေော နိုငျငံမြားသညျ လူဦးရတေိုးနှုနျးမြားသညျ။ ထိုထကျ လူဦးရတေိုးနှုနျးမြားသညျမှာ ကွှေးထူဆငျးရဲနိုငျငံမြား ဖွဈကွလသေညျ။ ဖွဈနကေဖြွဈစဉျ (pattern) အားဖွငျ့ မူဆလငျလညျးဖွဈ၊ ဆငျးလညျး ဆငျးရဲ၊ ပဋိပက်ခထူသောနိုငျငံ (လူအုပျစု)တို့မှာမူ လူဦးရတေိုးနှုနျး ကွီးမားနိုငျသညျ။
● Pew သုတသေနဌာန (Pew Research Center) က ၂၀၁၅ တှငျပွုလုပျသော လူဦးရတေိုးမှုဆိုငျရာ သုတသေနပွု ခနျ့မှနျးခကျြ တဈခုအရ – မူဆလငျတို့သညျ ကမ်ဘာတှငျ လူဦးရေ တိုးနှုနျးအမြားဆုံးဖွဈပွီး၊ ၂၀၁၅ ကမ်ဘာ့မူဆလငျလူဦးရသေညျ ၂၀၆၀ တှငျ နှဈဆဖွဈသှားလိမျ့မညျ ဟုဆိုသညျ။ ၂၀၅၀ ခနျ့သို့အရောကျတှငျ ကမ်ဘာ့မူဆလငျလူဦးရသေညျ ကမ်ဘာ့ခရဈယနျလူဦးရကေို ကြျောလှနျပွီး ကမ်ဘာတှငျ လူဦးရအေမြားဆုံး ဘာသာဖွဈလာမညျ ဟု ဆိုသညျ။ မူဆလငျအမြိုးသမီးတဈဦးလြှငျ ပမျြးမြှကလေး (၂.၉) ဦး ရယူလရှေိ့ကွပွီး၊ မူဆလငျ မဟုတျသူ (အခွားဘာသာမြားအားလုံး) အမြိုးသမီးမြားသညျ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ သားသမီး (၂.၂) ဦးသာ ရယူကွလရှေိ့သညျ ဟုဆိုသညျ။
● လှနျခဲ့သော သုံးနှဈခနျ့ ၂၀၁၈-ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၁၉) ရကျနတှေ့ငျ အစ်စရေးလှတျတျောက “အစ်စရေးနိုငျငံအား ဂြူးလူမြိုးတို့၏ အမြိုးသားနိုငျငံတျောအဖွဈ သတျမှတျသညျ့ဥပဒေ” (Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People) ကို အတညျပွုပွဋ်ဌာနျးခဲ့သညျ။ Basic Law ဆိုသညျမှာ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျခကျြ ကဲ့သို့ သကျရောကျမှုရှိသော ဥပဒအေမြိုးအစားဖွဈသညျ။ အခွားဥပဒမြေားသညျ ဤဥပဒကေို ဆနျ့ကငျြကြျောလှနျ၍ မရနိုငျကွောငျး သတျမှတျအဆငျ့ ဥပဒဖွေဈသညျ။
● ထိုဥပဒေ၏ ပထမဆုံးအပိုငျး “အခွခေံမူမြား” က အရေးကွီးသော မူ သုံးရပျကို ပွဋ်ဌာနျးသညျ။
(က) အစ်စရေးပွညျတညျးဟူသော မွသေညျကား ဂြူးလူမြိုးတို့၏ သမိုငျးအစဉျအလာအရ ဇာတိအမိမွဖွေဈပွီး၊ ယငျးမွေ အပျေါတှငျ အစ်စရေးနိုငျငံတျောကို တညျထောငျထားသညျ။
(ခ) အစ်စရေးနိုငျငံတျောသညျ ဂြူးလူမြိုးတို့၏ အမြိုးသားဌာနေ ဖွဈပွီး၊ ဤနိုငျငံတျောတှငျ ဂြူးလူမြိုးတို့သညျ ဂြူးတို့၏ သဘာဝအရပိုငျဆိုငျသော ယဉျကြေးမှုအရဆကျနှယျသော ဘာသာရေးအရပိုငျဆိုငျသော သမိုငျးအစဉျအလာအရပိုငျဆိုငျသော ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးပိုငျခှငျ့ကို ကငျြ့သုံးဖွညျ့ဆညျး ပွီးမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျသညျ။
(ဂ) အစ်စရေးအမြိုးသားနိုငျငံတျော၏ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့အား ကိုငျစှဲကငျြ့သုံးပိုငျခှငျ့သညျ ဂြူးလူမြိုးတို့နှငျ့ သီးခွားသကျဆိုငျသညျ။ (unique to the Jewish people)
● ဤဥပဒပေါ အခွားသိမှတျဖှယျရာ အခကျြတခြို့မှာ – ဟီးဘရူး (ဂြူးဘာသာစကား) အား “နိုငျငံတျော၏ ဘာသာစကား” The State’s language အဖွဈ သတျမှတျပွီး၊ အာရပျဘာသာစကားအား အထူးအဆငျးအတနျးရှိ ဘာသာစကားအဖွဈ အသိအမှတျပွုသညျ။ ရပျဝေးမွခွေား ဒိုငျယာစပိုရာ ဂြူးလူမြိုးမြားအတှကျ အစ်စရေးနိုငျငံတျောက ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈစသညျအားဖွငျ့ ဆကျစပျဆောငျရှကျရနျ ပွဋ်ဌာနျးသညျ။ ပွညျပမှ ဂြူးဘာသာဝငျမြားအားလုံးအတှကျ အစ်စရေးနိုငျငံက အခြိနျမရှေးတံခါးဖှငျ့ထားရနျ သတျမှတျသညျ။ (အထူးသဖွငျ့ ပါလကျစတိုငျးသိမျးပိုကျနယျမွအေတှငျး) ဂြူးတို့က အခွခေအြိုးအိမျအစုမြားတညျဆောကျခွငျး (settlement) အား မူဝါဒတဈရပျအဖွဈ လုပျဆောငျရနျ အသအေခြာဖျောပွ အားပေးထားသညျ။ ဂြူးဖွဈခွငျးကို အကွောငျးပွု၍ သျောလညျးကောငျး အစ်စရေးနိုငျငံသားဖွဈခွငျးကို အကွောငျးပွု၍ သျောလညျးကောငျး ဒုက်ခကွုံနကွေရသညျ့ မညျသညျ့ ဂြူးလူမြိုးတို့အတှကျမဆို သူတို့၏ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုအတှကျ အစ်စရေးနိုငျငံတျောက အားထုတျလုပျဆောငျရမညျ – စသညျအားဖွငျ့ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။ တိုတောငျးအားကောငျးလှသော အစ်စရေး အမြိုးသားနိုငျငံတျော ဥပဒအေား အောကျတှငျ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။
● ယနလေ့ကျရှိတှငျ အစ်စရေးနိုငျငံသား အာရပျလူမြိုး အရအေတှကျမှာ နိုငျငံသားဦးရစေုစုပေါငျး၏ (၂၀.၉၅) ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈသညျ။ အာရပျလူမြိုးမူဆလငျတဈဦးဖွဈသူ Raleb Majadele မှာ အစ်စရေးအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ပထမဦးဆုံးသော အာရပျမူဆလငျဝနျကွီးတဈဦးအဖွဈ ပွီးခဲ့သော ၂၀၀၇-ခုနှဈ လဘောပါတီအစိုးရတှငျ ပထမဆုံးအကွိမျပါဝငျလာခဲ့သညျ။
[လူငယျ​မြားအတှကျ​ နိုငျ​ငံ​ရေး မှတျ​စုတိုမြား (၁၇)]
Previous ခတျေသဈ အစ်စလမျမဈ အခွခေံဝါဒီတို့၏ ဖခငျကွီး ဆယေဈကူးတာ့ဘျ (Sayyid Qutb)
Next အဆုံးစှနျပေးဆပျခဲ့သူမြားအတှကျ လငျကငျး၏ အလေးပွုမိနျ့ခှနျး